Game အကြောင်းမေးမလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited April 2010 in Other
ဒီဖိုရမ်မှာ ဂိမ်းအကြောင်းရေးတာ သိပ်မတွေ့ရဘူးနော်...
ဂိမ်းရေးနည်းလေးသိတဲ့သူရှိရင် ဖြေပေးကြပါ ခင်ညား:101::101:
flash နဲ့ စဆွဲကြည့်ပါလား...help file ကနေ ဖတ်ကြည့်ပြီးလုပ်...လွယ်ပါတယ်...flash game လေးတွေစဆွဲကြည့် ပြီးတော့ flash game ဆွဲပြီး ရင် မသိတာတွေတွေကို flash forum မှာမေးပေါ့....သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆွဲတာတွေ့ဖူးတာပါ.....ဒီထက်မြင့်ချင်ရင်တော့ 3D Software နဲဆွဲကြည့်ပေါ့...ဂိမ်းဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ စက်ကောင်းဖို့လိုတာတော့အသေအချာပဲနော်........အနော်ကတော့ game ဆွဲတာ ၀ါသနာမပါဘူး...ဂိမ်းဆော့တာတော့ အရမ်း၀ါသနာပါတယ်..ဆွဲပြီးရင်ပြောနော်..အနော်ဆော့ကြည့်မယ်... ဂိမ်းထဲမှာ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေများများထည့်....ဟီး..ဟီး..
ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ပါဦး mmgamedev.blogspot.com ။
C++ နဲ့ DriectX ကိုအသုံးပြုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် Dark Basic နဲ့ရေးရင် တော်တော်လေးကို လွယ်ပါတယ်။
3D Game ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ Hardware ပိုင်းက တောင်းဆိုလာပါရော။
အရင်ဆုံး Flash Game လေးတွေက ဆွဲရတာလွယ်လည်းလွယ်တယ်။
There isasoftware that can do games software name is Game Maker pro v6.0 and later now. But actually that software need some skill too.
ဂိမ်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာက ၂ မျိုးရှိပါတယ်.. ၁ ခုက ရှိပြီးသား tools တွေကိုသုံးတတ်အောင် လေ့လာပြီး ကိုယ့်ဟာကို အပျော်သဘောမျိုး (နောက်ပိုင်း စီးပွားဖြစ် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ) လုပ်တာပါ.. အဲလိုမျိုးစိတ်ကူးတာဆိုရင်တော့ စောစောက အပေါ်မှာပြောတဲ့ Game Maker တို့.. DarkBasic တို့ 3D Game Studio တို့ လို tools တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာပြီး လုပ်လို့ရပါတယ်.. basic game လေးတစ်ခုဆိုရင်တော့ ဘာပရိုဂရမ်းမင်းမှ မပါပဲနဲ့တောင် လုပ်လို့ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် action တွေ.. behavior တွေရေးချင်ရင် ရေးလို့ရအောင် သူတို့မှာ scripting language တွေလဲပါပါတယ်.. အဲဒီလို script တွေရေးတတ်ချင်ရင်တော့ programming basic လောက်တော့သိမှ ရပါမယ်.. programming အခြေခံလောက်သိတော့မှ သက်ဆိုင်ရာ tools ရဲ့ scripting language အကြောင်းကို ပြန်ပြီးလေ့လာရပါမယ်.. အဲဒါတွေသုံးပြီး လုပ်ထားတဲ့ commercial game တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်..
နောက်တစ်ခုကတော့ game development ကို professional အနေနဲ့လုပ်တာပါ.. အဲဒါဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး must to learn ကတော့ C++ ပါ.. C++ ကိုတော်တော်လေး ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုတော့မှ (data structure, pointers, OOP, etc) နောက်တစ်ဆင့် ထပ်စဉ်းစားရပါမယ်.. အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ engine (framework, codebase,..) ကိစ္စပါ.. အင်ဂျင်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ ဂိမ်းတိုင်းမှာ ပါတဲ့ common feature တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရေးထားတဲ့ code base ကိုပြောတာပါပဲ.. ဥပမာ graphic, input, sound, UI အဲဒါတွေကို ဂိမ်းတိုင်းမှာ သုံးရမှာပါ.. အဲဒါကို ကိုယ့်ဟာကို အစအဆုံးရေးမှာလား.. ရှိပြီးသား framework တစ်ခုခုပေါ်မှာ အခြေခံပြီးရေးမှာလားဆိုတာကို စဉ်းစားရပါမယ်.. ကိုယ့်ဟာကိုရေးတဲ့အတွက် အားသာချက်ကတော့ knowledge အများကြီးသာသွားပါမယ်.. ဘာ feature ထပ်လိုချင်လဲ ကိုယ့်ဟာကို ဘယ်နားမှာ ဘာရေးလိုက်ရမလဲသိပါတယ်.. feeling လဲကောင်းတာပေ့ါ.. ကိုယ်ပိုင် engine နဲ့ ဂိမ်းရေးတာဆိုပြီး .. ဒါပေမယ့်တစ်ဖက်မှာတော့ အချိန်တော်တော်ပေးရပါမယ်.. အဲဒီအတွက် အချိန်သိပ်မပေးချင်ဘူး.. ကိုယ်ကဂိမ်းပဲလုပ်ချင်တာ.. အင်ဂျင်ကိစ္စမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရှိပြီးသား code base တွေ framework တွေသုံးလို့ရပါတယ်.. နာမည်ကြီး professional တွေအသုံးများတာတွေကတော့ popcap sexy framework (2d, windows, free), playfirst playground framework (2d, free), ptk framework (2d, windows + mac, commercial), clanlib (2d, opensource), allegro (2d, opensource) အစရှိတာတွေပါ.. google ကြည့်လိုက်ပါ.. သက်ဆိုင်ရာ ဆိုက်တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီ framework တွေအားလုံးက C++ base တွေပါ.. C++ ရမှ သုံးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. နောက်ပြီးတော့ 2d game တွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်.. playground sdk ကတော့ LUA scripting ကိုသုံးပြီး ရေးရပါတယ်.. 3D game တွေလုပ်ချင်တာဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုပ်မယ့် game genre ပေါ်မူတည်ပြီး အင်ဂျင်ရွေးရပါလိမ့်မယ်.. FPS game မျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် DarkBasic ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကပဲ လုပ်တဲ့ FPS Creator ဆိုတဲ့ အင်ဂျင်ရှိပါတယ်.. GarageGames ကထုတ်တဲ့ Torque engine ရှိပါတယ်.. RPG ဆိုရင် RPG Maker လို engine မျိုးတွေရှိပါတယ်.. commercial engine တိုင်းကတော့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတိုင်း လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ထားတာပါပဲ.. ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလက်၀င်တာပေါ့ဗျာ.. အများကြီးပြင်ရမယ်ဆိုတော့..
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ C++ လဲမလုပ်ချင်ဘူး.. ကိုယ်က .net experience နည်းနည်းရှိနေတဲ့ programmer ဆိုရင်တော့ C# နဲ့ XNA Framework ရှိပါတယ်.. XNA Framework ကိုသုံးပြီးရေးတဲ့ ဂိမ်းက PC ကော.. XBOX 360 အတွက်ပါဆော့လို့ရပါတယ်.. သူကိုစမ်းချင်ရင်တော့ VC# 05 Express Edition or Visual Studio 05 ရှိရပါမယ်.. ပြီးရင် XNA Framework ကို creators.xna.com ကနေ ဆွဲပြီး သွင်းရပါမယ်.. ပြီးရင်တော့ ဆက်လေ့လာပေတော့..
ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးရွေး အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခုသတိထားရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံးဂိမ်းကို ပြီးဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဂိမ်းမျိုးလုပ်ဖို့ပါပဲ.. pong တို့.. tetris တို့လို ဂိမ်းမျိုးလေးတွေစရေးကြည့်ပါ.. အဲဒီဂိမ်းလေးတွေရေးတဲ့ သဘောတရားတွေက ဂိမ်အကြီးကြီးတွေရေးတဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့လည်း အတူတူပါပဲ.. ပြီးရင် mario လိုဂိမ်းမျိုးတွေရေးကြည့်ပါ.. အဲဒါမျိုးလေးတွေကို အစအဆုံးပြီးအောင် ရေးနိုင်ပြီဆိုတော့မှာ တစ်ခြားကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အမျိုးအစားကို စလုပ်ကြည့်ပါ..
ဒါဖတ်ပြီးရင် နည်းနည်း idea ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာယခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...:67:
လုပ်နည်းလေး ebook ရှိရင်လည်းမစပါအုံး...:77:
(ကျွန်တော် flash game ကိုစရေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း...):39:
game တွေပီးရင်လဲ send လိုက်အုံးနော်...........:38::38:
ဒီ links တွေမှာသွားကြည့်လိုက်ပါ
Flash Ebooks Collections
လူကြီးဂိမ်းလား။ ခလေးဂိမ်းလားဟင်။ ဆော့ဖို့စောင့်နေတယ်နော်:5:
ကျွန်တော်က torncity လို text based mmorpg ကို myanmar version နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆော့နိုင်တာမျိုး ရေးချင်တယ် ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ကစရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ၀ုိင်း၀န်းချောက်တွန်း အဲ....အဲ အကြံပေးကြပါဦး။ ကျွန်တော့် game ပြီးသွားရင် VIP account တွေပေးပြီး ကျေးဇူးဆပ်ပါမယ်ဗျာ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ PHP တို့.. MySQL တို့ပဲလေ့လာရမယ် ထင်ပါတယ်..
လုပ်နည်းကတော့ first page က ပေးထားတဲ့ link မှာ စာအုပ်တွေရှာပြီး စဖတ်ဖို့ပါပဲ...
ဘာဂိမ်းလုပ်ချင်တာလဲ ဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပါ...
Warcraft လို General လိုဂိမ်းမျိုးကို တစ်ယောက်တည်းလုပ်ချင်နေတာ ဆိုရင်တော့ သိပ်လက်တွေ့မကျပါဘူး..
ဒီလိုဂိမ်း မျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
ကိုjohnko ရေ အစ်ကို ပေးတဲ့ site ကဖွင့်လို့ရဘူး ဗျ။
blogspot မဟုတ်ဘဲ တခြားဆိုက်ရှိသေးလားဗျ။
iPhone Game ကတော့ ၂ ယောက် အများဆုံး ၃ ယောက်လောက်နဲ့ ရေးလို့ရမယ်ထင်တယ်။ အကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူက 3D ပါတယ်ဆိုပေမယ့် PNG base နဲ့ ရေးကြတာပိုများပါတယ်။ Game က အဓိက ဇာတ်လမ်းဇာတ်သွားနဲ့ idea က အဓိက ကျတာ။ Game အကြီးကြီးဖြစ်တာ မဖြစ်တာက အဓိက မကျဘူး။ iPhone Game ရေးချင်ရင်တော့ စျေးကြီးလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် Win မှာ ရေးချင်ရင်တော့
အဲမှာ ရှိတယ်။ အများအားဖြင့် Game အတွက် Engine တွေ ပိုများတယ်။
Flash CS5 မှာ iPhone အတွက် ပါလာမယ်လို့တော့ ပြောထားတာပဲ။